Kuzadza Muchina, Cubitainer, Inowira Mudziyo Mvura - Kaiguan
Changzhou Kaiguan Packaging & Technology Co, Ltd.iri iri Changzhou guta, dunhu reJiangsu, China. Icho chiri pakati peChina chehupfumi chakagadzirwa Yangtze rwizi rwizi nekufambisa kuri nyore uye nharaunda yepamusoro yezvinhu. Isu tiri nyanzvi yekuvanzika tekinoroji bhizinesi uyo ane hupfumi ruzivo mukugadzira, kusimudzira, kugadzira zvigadzirwa zvinogadziriswa zvekupakisha
Pressure bvunzo vhidhiyo
ONGORORA ZVEDU ZVINOKOSHA PRODUCTS
Flexible uye yakapfava, Inowira uye isingaremi, Kuderedza mutengo
Musangano wedu wakagadzirirwa 4 seti furidza kuumba michina (Model 25A); 2 rinovira chinjikira jekiseni Kuumbwa michina 120g, 4 rinovira wehunyambiri jekiseni Kuumbwa michina 125g, 2 rinovira wehunyambiri jekiseni Kuumbwa michina 80g, 2 rinovira bhegi-kugadzira michina.
Tinogona kupa 1 litre kusvika 50 litre chechener bhegi mubhokisi; Uye isu tinogona kupa cubitainers kubva volum 1 litre kusvika 25 litre.
Tine stock yeese akaenzana saizi mabhegi. Yedu yekugadzira mitsara iri kushanda maawa makumi maviri nemana.
Iyo kambani inovhara nzvimbo ye8000㎡
Ine vashandi makumi matanhatu
Makore gumi nemaviri ekuziva ruzivo
KUSHANDIRA KUNE GURU-REMAHARA
4000㎡ imba yakachena
Misika uye Kushanda
Mushonga unouraya utachiona mumaoko . Disinfectant fluid
Chiremba Ultrasound gel
Mwaka (Sake, soy muto, Vhiniga)
chii vatengi vedu vanoti?
Hwakanaka hunhu chose.
HattoriAkio Komura Singapowo
John ainyatsobatsira uye akatishandira zvine hunyanzvi nekutaurirana kwakakwana.
Kubva payakagadzwa, fekitori yedu yanga ichigadzira zvigadzirwa zvekutanga zvepasirese nekutevedzera mutemo wehunhu kutanga. Zvigadzirwa zvedu zvakawana mukurumbira wakanaka muindasitiri uye inokosha kuvimba pakati pevatsva nevakuru vatengi ..
Kavha mabhegi e hypochlo ...
Kufuridzirwa neCOVID-19, pane kuwedzera kuri kudiwa kwemishonga inorwisa mabhakitiriya senge disinfectant nedoro. Kubva kutanga kwegore ra2020, michina yedu iri kushanda maawa makumi maviri nemana zuva rega rega kumusika we hypochlorous acid disinfectant nedoro. Tiri kutumira anopfuura 100000 hrs b ...
Ichi ndicho chigadzirwa chedu chitsva chine dhizaini dhizaini. Bhegi racho rakagadzirwa nemapurasitiki akawanda. Iyo yekunze layer (polyamide + polyethylene) inodzivirira kubva kuoksijeni uye unyoro; kuwanda kwayo uye kuumbwa kwayo kunogona kusiyana zvichienderana nezvinodiwa nemutengi kana chigadzirwa. Iyo yemukati rukoko (polyethylene) ...
Zvakawanda vatengi vedu vanotanga kushandisa cheertainer kuzadza zvigadzirwa zvemvura. Zvino, chii chinofadza? Chayo chivharo chitsva chekuputira chinosanganisa kuchinjika kweBhegi muBhokisi uye zvakavandudzwa zvakanakira zvigadzirwa zvakaomarara kana zvakaomarara, izvo zvinoita kuti cheeratainer iyo p ...